Dzivisa iyo App Store ne "Wedzera Kumba Screen" | Martech Zone
Dzivisa App Store ne "Wedzera Kumba Screen"
Chishanu, July 22, 2011 Mugovera, January 23, 2021 Nick carter
Ndoziva kuti ini zvimwe ndinobata zvimwe izvi, asi ini handisi Mac fan. Ok, ini ndiri pachena kuti handigoni kumira navo. Ini handikwanise kuisa munwe wangu kuti sei, asi heino mavambo: kuti ugadzire App yeiyo inokudzwa iPhone, unofanirwa kukura chete paMac neMac software -investment inodarika $ 2,000.
Zvakangodaro, iyo iPhone inoshandura musika uye svikiro rekushambadzira iro rinofanirwa kupihwa nemabhizinesi.
Saka, iwe unoda mabhenefiti eApp-senge kuwana, asi iwe haudi iyo mari (kana kumanikidzwa kutama kuenda kuMac chikuva), kana iwe pamwe haudi kudzidza mutauro mutsva wese wekodhi.
Iwe waita zvakanaka pawebhu kunyorera chirongwa, unakirwe ese mabhenefiti ekugadzirisa gore, saka nei uchivaka mutengi application manje? Kunyanya kana usiri kunyanya kufarira kuburitswa kweApp Store - vanhu vanozowana yako application kuburikidza neyako yekushambadzira, iwe unongoda kuvapa iyo imwechete-yekukasira yekuwana maitiro. Unoda pseudo-app.
Wedzera kuPamhepo Screen
Nhau dzakanaka. iPhones dzakavakira-mukati kugona kutsigira iyo chete mhando yebasa. Hapana Mac inodiwa. Hapana chechipiri chirongwa chinodiwa kune mutengi-parutivi kunyorera. Zvese zvaunoda ndezvi:
Iyo webhusaiti yakagadzirirwa kana kupindura kune 320px yakafara.
ichi kodhi snippet uye mifananidzo
An apple-touch icon (png)
Kutanga, chii chiri kuitwa nekodhi iyi mune chikuru?
Iyo kodhi iri mu zip zip faira pamusoro yakagadzirirwa kuti raira mushandisi pamatanho akakodzera avanoda kutora, intuitively kuvadzidzisa ivo veko iPhone mabasa ayo atove kuwanikwa kwavari ayo anoita kuti peji rako rewebhu riwanikwe senge chero imwe App. Chechipiri, ine matanho akavakirwa mukati zvekuti izvi zvinongoratidzwa paPhones uye zvinobvumidza mushandisi kuvhara iyo kukurumidza, kusazombozviona zvakare kwenguva yemwedzi mitanhatu, panguva iyoyo ivo vanozoyeuchidzwa zvakare.
Zvino, kune iyo geeky chikamu: ndingaiisa sei?
Sevha yako apple-touch-icon.png faira mune dhairekitori remudzi webhusaiti yako uye utaure nezvakakodzera> chinongedzo> tag mumusoro.
Isa mifananidzo inowanikwa mu zip faira (pamusoro) mudhairekitori pathed / mifananidzo /
Namatira kodhi kubva kumavara faira yakawanikwa mu zip faira (pamusoro) pamberi pechikamu chekuvhara muviri pawebhu peji rako (ma)
Ndizvo. Kana iwe ukatevera aya matanho, iwe unofanirwa kuona kukurumidza kuoneka pane yako iPhone iyo inonongedza mushandisi kune pfupi nzira icon muSafari yavo browser uye ovaraira kuti Wedzera kuPamhepo Screen yemumwe-pombi yekuwana sevamwe vese maapp
Iye zvino, yako webhu kunyorera ichave-yakamisikidzwa nechiratidzo pane iyo iPhone skrini. Mukuonekwa uye nyore-kwe-kuwana, ine zvese mabhenefiti echizvarwa App pasina mutengo kana kunetsa.
Tags: musangano wekugadzwazvemukati zvekudzidzisaEpicormvumo yakavakirwa emailpuroti
Nick Carter zvechokwadi muzvinabhizimusi pamoyo. Iye ndiye munyori we Unfunded, pamwe chete neiye muvambi weAdressTwo, a Bhizinesi duku CRM software iyo inopa vanamuzvinabhizimisi maturusi nemaitiro ekugadzirisa kwavo kutengesa uye kugadzirisa kushambadzira kwavo.
"Ndeupi" Anoshanda Zvakanakisa Kuvhara Kutungamira?
Vhidhiyo: Emailvision Technology uye Kukura
Jul 22, 2011 na5: 05 PM
Great post. Izvi ndizvo zvatakaita nazvo http://maps.wbu.com - iwe unowanawo akati wandei hacks kunze uko anobvisa kero kero bar uye yekutsikisa nyaya nekuburitsa izvi! Ini ndinobvuma kuti iyi mhinduro iri nani pane kushanda kuburikidza neApp Store. Uye… sezvo paine zvishandiso zvakawanda pachiitiko, kunyora iyo app pamhepo kuri nyore kutakurika kune mamwe mapuratifomu.